Sannad cusub ayaa ka bilaabmaysa dunidan dhibaataysan iyadoo aan sii wadno socdaalkayaga cajiibka ah ee sii dheeraada oo u sii gala boqortooyada Ilaah! Sida Bawlos u qoray, Ilaah wuxuu inaga dhigay muwaadiniin boqortooyadiisa markii uu “inaga badbaadiyey xoogga gudcurka oo uu ina geliyay boqortooyada wiilkiisa uu jecel yahay, kaasoo aan ku helno badbaado, taas oo ah cafiska dembiyada” (Kolosay). 1,13-14).
Maaddaama xuquuqdeenna cirka ay ku sugan tahay jannada (Filiboy 3,20), waxaa na saaran waajib ah inaan Ilaah u adeegno, inaan noqonno gacmihiisa iyo hubkiisa adduunyada, anagoo deriskeenna jecel sida nafteenna oo kale. nafteena ama adduunka nagu wareegsan, yaynaan shar ka adkaanin, laakiin waa inaan wanaagga kaga adkaano (Rooma 12,21:XNUMX). Ilaah ayaa leh sheegashada koowaad ee noo, iyo aasaaska sheegashadani waa in uu si xor ah ula heshiisiiyay oo uu noogu jeclaaday oo uu furtay markii aan weli kujiraan addoonsiga rajo la'aan.
Tani waa sheeko layaableh oo muujineysa run iyo yaab yaab leh. Siduu Bawlos ku qoray Kolosay 1,12:2,1, waa Ilaah “kan ina hagaajiyey inaan dhaxal u helno kuwa quduusiinta nuurka ku jira”. Waxaan nahay abuurkii Eebbe, ee nala heshiiyey oo lagu soo furtay Masiixa, maxaa yeelay Ilaah baa na jecel! Mid ka mid ah Qorniinka aan jeclahay waa Efesos 10: XNUMX-XNUMX. U fiirso ereyada si geesinimo leh:
Maxaa dhiirigelin kara? Badbaadadeenu kuma xirna annaga - waxay ku tiirsan tahay Ilaah. Maadaama uu aad noo jecel yahay, Masiixa wuxuu ku sameeyay wax walba oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo. Waxaan nahay abuurkiisa cusub (2 Korintos 5,17:6,15; Gal. XNUMX). Waxaan sameyn karnaa shaqooyin wanaagsan maxaa yeelay Ilaah wuxuu inaga xoreeyay silsiladaha dembiga oo nafsad ahaanteenuu na siiyay. Waxaan nahay wixii Eebbe ina abuuray inaynu qabno, isaguna wuxuu ina amraa inay runtii ahaadaan waxa aynu nahay - abuur cusub oo uu inaga sameeyay Masiixa.